Oge emepee nke Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line | | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulOge emepee nke Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line
14 / 05 / 2020 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, Foto, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey
imamoglu mecidiyekoy mahmutbey mere nyocha na akara metro
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu mere nyocha na Mcidiyeköy-Mahmutbey Metro Line's Nurtepe Station. N'ikwu na ha na-eme atụmatụ itinye ọrụ ahụ na Mee 19, mana usoro ọgbaghara ahụ ekweghị nke a, İmamoğlu kwuru, “Eso ụlọ ọrụ mba ofesi nwee nkwekọrịta maka sistemụ akara ahụ. Ọ bụ ihe nwute, ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ a, ndị na-arụ ọrụ ebe a, a na-ahụkarị site na etiti Spanish na site na etiti na Spain. Ọ bụ ihe nwute, na usoro Covid, ha enwebeghị ike ịrụ ọrụ a ruo ụbọchị Mach 3 ”. N'ikwu na e nwere ebe ndị ọzọ a na-ewu ụlọ ebe usoro ahụ nwere ọgba aghara dị otú a, İmamoğlu kwuru, “Ọ dị nwute maka ọdịda a, mana ọ bụghị azụmaahịa a na-enweghị ike idozi; Anyị ga-edozi ya ngwa ngwa. ”
Ekrem İmamoğlu, onye isi obodo Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), mere nyocha na Nurtepe Station nke Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line na-arụ ọrụ. Citizensmụ amaala, ndị natara ozi na Imamoglu ga-abịa na ọdụ, mere ngosipụta ịhụnanya nye Onye isi Ala IMM site na mbara ihu. Mgbe ọ na-aza mkpu otuto nke ụmụ amaala, Imamoglu gbadara n'ala ụlọ ihu ụlọ. Ihe omuma nka banyere ogbara ohuru ahu nyere İmamoğlu site Pelin Alpkökin, onye isi nke Ngalaba MMS Rail Systems. Alpkökin, ahịrị gị, Beşiktaş na Kabataş Ọ kọọrọ ndị mmadụ akụkọ banyere ọrụ mgbe ochie ahụ nọ na themamoğlu.
Mgbe ọ tụlechara ihe ngosi Alpkökin, İmamoğlu kwuru, sị: “O nwere ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị si mba ofesi ebe a. Anyịtala ụlọ ọrụ akara a. Ọ bụ ihe nwute, ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ a, ndị na-arụ ọrụ ebe a, a na-ahụkarị site na etiti Spanish na site na etiti na Spain. Ọ bụ ihe nwute, na usoro nke Covid, ha enweghị ike ịnye ọrụ a ruo ụbọchị Mach 3. Ha kwesiri ịhapụ ebe ọrụ ha laghachi obodo ha. Ruo ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ ọnwa 2,5, anyị enweghị ike inweta ọrụ a. O nwere ụfọdụ ndị ọrụ obodo ahụ na-arụ ọrụ a, dịka akụkọ ụlọ ọrụ onye ọrụ ahụ si kọọrọ anyị. Mana n'ezie nke a bụ ọmụmụ na ezughi oke. Dịka ị pụrụ ịhụ ugbu a, ọdụ ụgbọ ala agwụla agwụ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, naanị ihe na-emechi emechi bu akara. Akụkụ nka na ụzụ dị oke mkpa n'okwu ndị a. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ gaghị ekwe omume ịmepe ebe a na-enweghị ule na usoro ndị ahụ. Anyị na-eche ya ugbu a; a na-aga n'ihu na-ekwurịta okwu. Ma ụlọ ọrụ nkwekọrịta ma anyị na-aga n'ihu na nkwukọrịta ahụ iji weta ya ngwa ngwa o kwere mee. Anyị nọ na nnukwu mbọ. Ebe o nweghi azịza doro anya, ihe dị ka ụbọchị iri asatọ, ụbọchị itoolu ka a ga-etinyerịrị ebe a na ntinye aka. Anyị na-eme nnukwu mbọ ịkwado ma si na Spain bute ndị ọrụ ebe a ozugbo enwere ike. Ozugbo anyị bido, anyị chọrọ ịnata ọrụ akara nke akara anyị ma nye ndị bi na Istanbul ka ngwa ngwa o kwere mee. Ma ọ bụghị na anyị ga-emeghe na Mee, anyị nwere ụdị ihe mwute a. Anyị nwere saịtị ihe owuwu na ọrụ ndị ọzọ ebe Covid enwetawo ụdị nsogbu ndị a. Ọ dị anyị nwute maka nsogbu a. Ọ bụghị azụmaahịa a na-enweghị ike idozi; anyị ga-edozi ya ngwa ngwa. ”
INTANET INTERAL SITE BALCONES
Mgbe mkpọsa ahụ gasịrị, İmamoğlu, onye ya na ndị nnọchite anya ya gbadararịrịrị n'elu ikpo okwu, wee gaa Mevlüt Öztekin, onye isi obodo Kağıthane. Emechaa nyocha n'ụlọ ọrụ ahụ, İmamoğlu hapụrụ Nurtepe na nkwanye ugwu nke ụmụ amaala chịkọbara na balconies ha "Anyị hụrụ gị n'anya, Onye isi ala, daalụ."
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Line, relọ nkwakọba ihe - Mpaghara Mmezi na Njikọ Njikọ Nkwakọ ...
Nlere anya Okike: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro akara dị nro na ebe nkwakọba ihe, ụlọ nkwakọba ihe…
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line Construction Work Tender weghachiri na 16 Eprel
Nkwupụta Obi Ụtọ: Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Rail Transport Maka Usoro Ọgbọ njem Ọha…
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line, Mpaghara Nkwado ebe ana-echekwa ya na otu ụlọ nkwakọba ihe nkwakọba ụlọ…
Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Line Warehouse - Mpaghara Mmezi na Njikọ Njikọ Nkwari ...
Clọ nkwakọba Mecidiyeköy-Mahmutbey - Mpaghara Mmezi na Njikọ Walọ Nkwakọba…
A na-eme maka ọrụ Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line na September
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro line ga-atụkwasị uru na oru ngo
Mecidiyeköy - A ga-etinye usoro ntinye aka na ịchọta na 2017
Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line akwụsị
Usoro mgbasa ozi Mahmutbey-Mecidiyeköy bịanyere aka na ya
Mmiri mmiri na-adabere na iwu Mecidiyeköy-Mahmutbey metro line
A ga-enye Asambodo Selluka nye Ndị Ọkachamara nke na-agbaso Elekere Hygiene na İzmir
Nkwupụta Obi Ụtọ: Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line Construction Work
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line Construction Work Tender Result (Nkwupụta Pụrụ Iche)
Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Line Nrụpụtaọrụ Electromechanical sistemụ…
Mahmutbey Mecidiyeköy Metro Line Car Ndugharị ule Egosi
Kabataş Kedu mgbe Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line ga-emeghe?